Kukho umyalezo omnye ongaqhelekanga, ochaza ukuba i-horseshoe ayikho nje into engumqondiso wenhlanhla, kodwa ikhuseli kunye nemikhosi yobubi.
Kwixesha elidlulileyo, uMbhishophu waseCanterbury wayehlala, igama lakhe linguDunstan. Kodwa wayengengomntu onqulo olunzulu kuphela, kodwa wayedume emhlabeni jikelele njengomkhweli onobuchule. Ngenye imini, uSathana waya kumkhandi wakhe waza wabuza umkhandi ukuba athintle inqatha.
UDunstan wayemangaliswe ngokutyelela ngoku, kodwa wavuma ukuthatha umsebenzi, ukuba uSathana uza kuvuma ukuba ahlanganiselwe eludongeni. Wachazela indwendwe engavunywanga ukuba le miqathango iyimfuneko, kuba inkqubo ibuhlungu kakhulu kwaye umkhandi wesabisa, njengokuba kwindlela uSathana ambetha ngayo inselo.
Isiqingatha seminyaka yesivumelwano esingcolileyo, i-Dunstan isetyenziswe emsebenzini, kwaye kungekudala i-horsehoe horsewoman. Wayesondela ngokugqibeleleyo kwinqweba, kwaye umkhandi waselungisa kuphela. Ukuthandazela ukuba yonke into ihamba kakuhle, umpempi waqala ukubamba isilumko sokuqala kwiqonga. Kwaye uSathana wancengca ngenxa yentlungu engapheliyo, kuba nayiphi na imeko, wayibusisa ngomthandazo, wayebuhlungu kuye. Efumana iintlungu ezimbi, engaziwa ngabantu, uSathana wancenga u-Dunstan ukuba amvumele ahambe, eshiye loo nto ingagqitywanga. Nangona kunjalo, umkhandi, ekwesaba ukuba udumo lwakhe luya kuba lubi, akazange amthobele kwaye waqala ukukhonkothela kwiisilumko ngamandla amatsha, ukuze azalise ukuqala kwayo yonke into.
Umtyholi wathinteka kangangokuba iindonga zazamazama, kwaye waqala ukubuza umkhandi kunanini ngaphambili ukuba amkhulule, athembise ukufeza nayiphi na iminqweno. UDunstan wacinga waza wathabatha kwisithembiso sikaSathana sokuthi akaze angene endlwini kwiingcango zakhe apho wayeza kuxhoma ipododkov.
Ukususela ngoko, kukholwa ukuba umoya ongendawo awuhambi nje kuphela kwikhaya apho abakhonkci behlala khona, kodwa futhi akahambi ezindlwini apho ihashe ihamba khona phezu kweengcango.
Kutheni i-horsehoe isebenza?
I-Horseshoe ngumdala kunabo bonke abantu abaziwayo beentlanga, ubutyebi, injabulo kunye nempumelelo. Iholide efunyenweyo ingaba neenzuzo ezininzi kumnini wayo:
Okokuqala, i-horseshoe iya kukuzisa ulonwabo ngothando;
Okwesibini, iya kufaka impumelelo kwishishini kunye nokugembula;
Okwesithathu, iya kuba negalelo ekulondolozeni impilo;
Kwaye, ngokuqinisekileyo, kuya kukukhusela ikhaya lakho kwimikhosi embi kunye neenjongo ezimbi zabantu abaza endlwini yakho.
Kukholelwa ukuba umphumo omkhulu wemilingo ulawulwa ngamahhashi owenziwe ngezandla zenkosi yangempela-umkhandi. Kuyinto enqwenelekayo ukwenza i-horsehoe kwintsimbi. Iyona nto ikhethekileyo yigolide, isilivere okanye ithusi. Iindawo zokusebenzela ezinye izinto azisebenzi.
Ukusuka kwindawo yokujonga amandla, i-horsehoe yensimbi ine-field mix mixing. Oku kuthetha ukuba i-horsehoe ithatha amandla amabi, akhutshwa ngummandla wangaphandle, kwaye anika amandla amandla.
Indlela yokubeka ngokufanelekileyo indawo yehashe endlwini
Okokuqala, akunakwenzeka ukulungiselela izinto ezivela kwizinto ezibonakalayo, ezifana nesiphambano somthi okanye iimveliso zeplastiki, ukuya kumahhashi. Ngenxa yokuba izinto zibhekwa "zifile" kwaye amandla abo awanciphisa impembelelo emihle yamahashe.
Okwesibini, i-horsehoe iya kuxhoma kwindawo ethile. Kuphela kuza kuzalisekisa injongo yalo:
Okokuqala, kufuneka ukwazi ukuba i-horseshoe imiselwe ngokufanelekileyo ngaphakathi ngaphakathi emnyango, kungekhona emnyango. Kule meko, i-horsehoe iya kubonakalisa amandla emakhaya kwaye iya kuba nefuthe elihle kubantu abahlala kuyo.
Ukulinda ukuphela kwe-horsehoe, udala "indebe" eqokelela amandla athile kwaye yinto ekhuselekileyo yendlu.
Ngamahhashi aphelile, unika isandla kwi-intlalo yabantu bonke abahlala endlwini.
Kulungile, kwaye okwesithathu, ukuba i-podkodova ibanjwe njengengqungquthela, ingafumaneka kwindawo ezithile kuphela:
Hlanganisa emnyango omnye weendlela ezi ngasentla;
Beka ngosuku lokuqala lwenyanga epheleleyo kwifestile, ukwenzela ukuba iziphelo zijoliswe ngaphakathi kwindlu. Oku kufumana ukubonakala kwemali endlwini;
Ingcwaba umhlaba kwicala elingasentla lesayithi. Isithethe esinjalo siya kukunika inkxaso yamagunya aphezulu kwiinkalo ezininzi zobomi bakho (impilo, inhlanhla, ukuvisisana ubudlelwane, uthando, njl);
Ungagcina ihashe emotweni, iya kukhusela umnini kwiingozi kunye nokungahambi kakuhle kwindlela.
Ulonwabo, owenziwe ngezandla!
Ngoku kuyacaca kutheni bekuyi-horsehoe ebonwa njengeliso lonwabo, intsapho kunye nenhlanhla. Kwaye wadalwa ngezandla zomtshakazi nomyeni, kuya kuba yintsapho entsapho kungekhona nje imilingo; Iholide iya kuba ngumgcini , umgcini wentsapho yendlu.
Yaye ukuba ufuna ukwenza into engayibalekiyo, imilingo, yenza ummangaliso kulabo abasandul 'ukutshata ngosuku lwabo lomtshato, indlela efanelekileyo yokwenza oku kukumema abaphathi be-smith abaza kunceda abancinci ukuba bakhe "uphawu" lwabo lolonwabo. Ndikholelwe, umkhosi onjalo awuyi kukhangeka kwaye uza kuba yinto eqaqambileyo ekudalweni kwintsapho entsha, yolonwabo.
Umthendeleko "wokudala ulonwabo?"
Endaweni yomcimbi womtshato, ummashi uyilungiselela kwangaphambili yonke into efunekayo: ithuluzi elixhobayo, isando, isithintelo, isitya kunye namanzi, izixhobo zokuxhasa umlilo nokulungiselela ihashe yamaxesha ezayo. Ukulungiselela amakhosikazi abanamava kuthatha isigqibo seyure. Njengommandla wombhiyozo yindawo evulekileyo malunga ne-3 sq.m.
Emva koko bamenywa abancinci, kwaye imfihlelo ye "Ukuqaliswa" komyeni kwiingcikizi ziqala. Ngexesha elifanayo amandla ayo kunye nokuchaneka kuhlolwe, ukwenzela ukuba kwinkqubo umyeni angaphoswa. Enyanisweni, kusemgangathweni nje kuphela, kwaye njengomthetho, bonke abaphathi bawela le mvavanyo encinane.
Kuyo umyeni kunye nomtshakazi bembatha iimpahla zokukhusela ezikhethiweyo kunye neefowuni, ezikhusela ekungcoleni ngongxamiseko kwempahla yazo emnandi. Kwaye ke, ngoncedo lomkhandi we-blacksmith owaziwayo, umyeni ufika ekufakweni kwehashe yamahhashi. Yonke le nkqubo ihambelana nehlombe eliqhwithelayo kunye namazwi ajabulisayo yindwendwe eyanelisiweyo kunye neyamangalisa. Emva koko umtshakazi uhlangene nomtshakazi kunye kunye nomyeni bakhonkxa ihashe yabo yekamva. Ngoko kwimo yomdlalo, amandla abo abasandul 'ukutshatyalazwa ukuba bavavanywe bahambelana.
Intsha yentloko yentsapho ifumana u-horseshoe alinganisekile ukuba umtshakazi anelisekile ngomgangatho. Emva koko, i-stigma ifakwa kwi-horseshoe, eqinisekisa ubungqina balo mveliso. Kwaye ekugqibeleni, umtshakazi ugqiba inkqubo kwaye ugxininise ihhashi lokugqiba. Kuhlala kuphela ukucoca umveliso kwaye uwugubungele ngepeyinti yegolide ukuze kuphuculwe ukubonakala kwe-aesthetic ye-horseshoe eqediweyo.
Kwaye apha uphawu lolonwabo lwentsapho lungele!
Ngaphantsi kwehlombe eliqhwithelayo leendwendwe ezityebileyo zincinci zinikezelwa ngoluhlobo lwazo lwentambo yolonwabo kunye nesatifikethi sokuqinisekisa ukuba ngababdali beli hambo.
Ngokuqinisekileyo, isipho esinjalo somtshato asinasisiseko, kodwa sinokunikezelwa kubahlobo okanye izihlobo ezininzi. Yaye ungathandabuzi ngomzuzu, omncinci uya kukuxabisa kwaye akaze alibale!
Yintoni abafazi abafana neCapricorns?
Ijoni elisekhohlo litshiza?
I-pancakes ebhaka ngeesusus
Iikhokheki ngecolethi emhlophe kwi-microwave
UJulia Vysotskaya ubhale umyalezo wevidiyo kubalandeli
Isonka lesopu kunye nokufafaza
Kukuphi na ukulungela ukulala
Umdlalo wesiganeko somtshato kunye neefoto
Iimfashini Zomtshato Eziqhelekileyo 2014